သူပုန်ပြန်လာဘီ ……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » သူပုန်ပြန်လာဘီ …….
Posted by စိန္ၾကက္ဆင္ on Jul 5, 2013 in Facebook, Gossip, Rumor | 29 comments
ဘာမှ မဟုတ်ဘူး …
ဟုတ်တော့ ဟုတ်လိမ့်မယ် ….
ကိုယ်ပြောချင်တာပြော ရေးချင်တာရေးရရင် … သူစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့လို့ … ကရုဏာထားပေးသူတွေကို …. ထုံးစံအတိုင်း အနှောင့်အယှက်ပေးဖို့ ..
ဘယ်တော့ အကောင်းရေးလို့ မရမဲ့ အတူတူ …
ဗီလိန်က ဗီလိန် လိုဘဲ နေတော့မည် …………..။
ဆိုတော့ သူပုန်ပြန်လာဘီ …
စစချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်းလိုက်ရအောင် …။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ကောင်စီ အနေဖြင့် ရွှေတိဂုံဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့ပေါ် အထူးခုံရုံဖွဲ့ စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း …..သတင်းမှ။
အပြန်အလှန် သုံးသပ်ချက် …..
ဟေ့ယောင်တွေ မင်းတို့ CCTV ပိတ်ထားတယ်လို့ လူသိရှင်ကြား လျှောက်ပြောရအောင် .. မင့် မိထွေး သီရိဒုံ သိသွားရင် နောက်တခါ ဒို့ဆီ မလာတော့ဘူး … အေရိုးဂေါပကတွေ ချန်တူးဝမ် တုန်းကလို ချက်ချင်းဖော်နိူင်လောက်အောင် နင့်ပထွေးတွေက တော်လို့လား ? မှတ်ထား မဖြစ်ရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး … နောက်ပီး လုပ်တာ အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ မိသွားတာ လူသိသွားတာ အပြစ် …. ခွေးကောင်ရဲ့ နင့်ရုပ်ကိုက ဟာသလူရွှင်တော် ဥဩရုပ်နဲ့ ပီးတော့ ကျနော် ဘိုမှူးကြီး အငြိမ်းစားပါလုပ်သေး ကြည်းနံပါတ်မေးတော့ နင့်အမေကလွှား ၅၄၇၇၁ တဲ့ တောက်စ် …… ၂ပဲ တပြား ဦးနှောက်နဲ့
အဟီး ဟုတ်ပါဘူး ဘိုချုပ်ခည … တားက ဟိုသောက်ကလေး မလောက်လေး မလောက်စား … လေးကို ပီးပီးရော ဖြေလိုက်တာပါ အဲ့နေ့က သားရှိတယ် စောင်းတန်းမှာ ကျားထိုးနေတယ် … သားတို့ လုံခြုံရေး ယူနီဖောင်းတွေက ရကတ ရဲတွေ၊ SB တွေနဲ့ စရဖတွေ အကုန်ယူဝတ်သွားတာ လုပ်တာလဲ တားတားရဲ့ ကလေးတွေ မဟုတ်ပါဘူး ခင်ည
ဟေ့ယောင် ဥဩ …… အဲယောင်လို့ မင်းဂျီးဒေါ်လင် MOFA ရဲ့ ဒယ်လီကေးရှင်းကို ငါ့ စရဖတွေ ဆွဲမထည့်နဲ့ … ကြောင်တောင် မလုပ်နဲ့ ကြားလား အရှေ့ဘက်စောင်းတန်းက မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်နဲ့ တောင်ဘက်စောင်းတန်းက ဖိနပ်သိမ်းရုံ၊ ကားပါကင် မင့် တဆွေလုံး ထမင်းငတ်သွားမယ် ..။
ဂျာ … အဲ့လိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ … ဒီလိုချိပါတယ် ဘိုချုပ် တားကလဲ နောက်ကို ကြည့်ပါဒယ် … အဲ့ကလေးနောက် သူ့တိုက် သူ့မီဒိယာက မလိုက်ပါဘူး .. ပြောသံကြားတာတော့ အလုပ်မပြုတ်တောင် ကံကောင်းဆိုဘဲ … ဆိုတော့ တဗွေထဲ ဒီကလေး မနူးမနပ်နဲ့ ဖြဲနေလို့ တားတားတို့ အပီးသိပ်လိုက်တာဘါ … ခင်ည
အမှန်တရားဆိုတာ တယောက်တည်း တကိုယ်တည်း တဦးတည်း မရပ်တည်နိူင်ပါဘူး ခင်ည … ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးတောင် … တားတားတို့ ဂေါပကတွေ ကောင်းမှုကြောင့် မီးရောင်ထိန်ထိန် ရွှေသင်္ကန်းတဝါဝါနဲ့ နေရတာပါခင်ည …. သူဟာသူ နာ့ထဲမှာ ဆံတော်တွေ ချိတယ်ကွဆိုဘီး တားတို့ကို ကလန်ရင် … တားတို့က ထုံးသုတ်ပလိုက်မှာ …. ဟင်း ဟင်း … ဘာဖြစ်တွားမယ် ထင်လဲ … ဒီဘုရား တားတို့ကို ကလန်ရင် ဗိုလ်တထောင်ဘုရားတို့ ဘာဘုရားတို့ အခြေအနေကောင်းမှာပါ ခင်ည …..
အေးကွာ မင်းတို့ ပြောမှ ငါတောင် စိတ်ပါလာဘီ … ဒါနဲ့ ဂေါပကပေါက်ဈေး … ဘယ်လောက်တုန်းကွ?
ဟုတ် ဆြာဘိုချုပ်ဆို သိန်း၇၀၊ ဆြာက ဘိုချိုကတော်ဆို သိန်း၄၀၊ အလွတ်ဆို သိန်း၄၀ဝ ၆ဦးမျှပေးပီး ၂နှစ်ခွဲစောင့်ရပါမယ် ခင်ည ……..
ဆက်ရေးရင် ဂဇက်ဆာဗာ ထပ်ကြွတော့မှာမို့ … ဂလောက်နဲ့ဘဲ နားပါရဇီ
အသေးစိတ်သိလိုသူများ ဖေ့စဘွတ်ကြွကျပါကုန် ….
ဆိုလိုချင်တာက ဒီလိုဗျ ….
နိူင်ငံတစ်နိူင်ငံက အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးကို ကိုယ့်နိူင်ငံလာဖို့ ဖိတ်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် လာချင်ပါတယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ ဒယ်လီကေးရှင်း ၂မျိုးရှိသဗျ ….
MOFA နဲ့ ARMY …. အဲ့မှာ မလာခင် အခင်းအကျင်းပြရပါတယ် … သက်ဆိုင်ရာ နိူင်ငံက လက်မခံရင် အထမမြောက်ပေဘူးပေါ့ဗျာ … မစ္စတာအိုဘားမား လာချင်လွန်းလွန်းလို့ မြန်မာပြည်ကို လာခဲ့ပေမဲ့ အဲ့အခင်းအကျင်းတွေကို မယုံလို့ သံရုံးနဲ့နီး ရေပြင်တဆက်တည်း ဟိုတယ်မှာတည်း ကိုယ့်လုံခြုံရေးနဲ့ ကိုယ်လုပ်သွားကြောင်း … အဲ့ဒါ ဘယ်လောက် သိက္ခာကျသွားလဲဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေ သိပါတယ်။
ဆိုတော့ .. ပြောချင်တာက အဲ့ကလေး တယောက်တည်း အော်နေမဲ့အစား
ယိုးဒယားသံရုံးကို လိပ်မူပီး နည်းနည်း လီဆယ်လိုက်ရင်ဖြင့် ဝက်ဝက်ကွဲသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း … ။
မပူပါနဲ့ အနှီ ဖြစ်စဉ် ကို အကြမ်းဖျဉ်းလောက်တော့ ဒလန်တကောင်ကောင် ကပို့ပြီးနေနှင့်လောက်ပါပြီ.
ကိုယ့်တပည့် လမ်းလူမိုက်အဆင့်လောက်ကို ခုခံကာကွယ် ဖို့ ဘာတွေ ဘယ်လောက်ချနင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာ
မသိတဲ့လူစားမျိုး. ကမာ္ဘ့အံ့ဖွယ် စာရင်းပေါက်တဲ့ နေရာတခုမှာ တာဝန်ရှိသူမဖြစ်နေသင့်ဘူး လို့ပဲ ဘွင်းဘွင်းပြောပရစေ.
အောက်က ပိုစ့် နဲ့ တွဲဖတ်ရမှာ ဗျ . . . . .။
ကလု …. တွဲဖတ်မိရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ် ….
သားတို့ လုံခြုံရေး ယူနီဖောင်းတွေက ရကတ ရဲတွေ၊ SB တွေနဲ့ စရဖတွေ အကုန်ယူဝတ်သွားတာ လုပ်တာလဲ တားတားရဲ့ ကလေးတွေ မဟုတ်ပါဘူး
CCTV နဲ့မိုးကြိုး နဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့တော့မဖတ်ဖူးသေးဘူး.
အညောင်းပြေ ညောင်မြစ်တူးတာ ပုတ်သင်ဥတွေ ပေါ်ကုန်တာတော့. မတတ်နိုင်.
တကယ်က ၇၀-၂၀ဝမမ တလုံးရဲ့ဈေးနဲ့ လဲယူရမယ့် ဂုဏ်သိက္ခာရဲ့ တန်ကြေး ညီမျှခြင်းချကြည့်ရင်
တောင်းပန်ကြေအေး လိုက်ကြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ.
တဘက်နဲ့ တဘက်ရယ်လို့ ဘက်ဆိုတာပါလာရင်တော့ သူလွန်ကိုယ်လွန် ရှိတတ်ကြစမြဲပါ.
ဒီကိစ္စ လွန်တဲ့ဘက်ကတောင်းပန်ကြေအေးလိုက်ဖို့ပဲ ဆန္ဒပြုပါရဲ့.
ကျနော်က ပြဿနာ မခေါ်လာရိုးအမှန်ပါ …။
ကျနော့်မေးလ်ကို အရီးတခါပြသလိုပေါ့ ……။
ခက်တာက နာမည်ကြီးသူ ကျနော်
လုပ်သူက တခြား ….။
ခေါ်လာသူ ရွာသားကြီးဗျို့ …..
သူပုန် ပျံလာဘီ ဆိုလို့
အထူးအဆန်း လာကျိဒါဘာ ….
ဘာမှလည်း မထူးဆန်းဘူး …
ငါဒို့ ရေးဒလို စာဒွေ ရေးထားဒါဘဲဂိုး ….
လောလောဆယ် ကွန်မန့်တွေ ကျိရဒါဒေါ့ဖြင့်
အရီး သူပုန် ထနေလေရဲ့)
သူပုန်ကြီးတော့ အစိုးရ လို့ ကြားဖူးတော့ကာ……
ခရိုနီများ လုပ်လို့ရမလားလို့ ဖားထားမှ
အမှန်အကန်တွေလျှောက်ပြော လို. သပုန်ဖစ်တာ နဲတောင်နဲသေး………. ကိုယ်ဟာကို ဟိတ်နဲ.ဟန်နဲ.နေရင် ဂေါပကလောက်ဖြစ်အုံးမယ်…….. ညံ့ပ…
အင်းးး သူပုန် ပြန်လာပြီ ဆိုတော့
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူပုန့် အသံကြားရမယ်
ကဲ ကဲ သူပုန်ကြီး… ဘုရားပေါ်တက်မွှေနေပါ့လား…
ဘုရားပေါ်က လုံခြုံရေးငတိများအကြောင်းတော့ မပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာ… စိတ်ကုန်လွန်းလို့
အဲ… ဘုရားပိုက်ဆံစားတဲ့ ဂေါပကများကတော့… အဝီစိမှာ အောက်ဆုံးကဆိုလားပဲ… ဟီ ဟိ
ကရဲစီ နင်တော့ ဘုရားဂေါပကဗိုက် ကျော်ခွနင်းမိပီ…. အဝီဇိငရဲ ဇော်ထီးဆင်းပေဒေါ့…
ဆင်းရမယ် ဆိုရင်ဖြင့်လည်း လေထီးလေး ထည့်ပေးလိုက်ပါ ဖယ့
ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား
ဟေ့ ကောင်တွေ မှတ်ထားကြ ဒါမျိုးလာလုပ်လို့မရဘူးကွ
ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
( ငယ်တုန်းက ရုပ်ရှင်ထဲမှ သူပုန် ဆိုရင် အဲလိုဘဲ ဇွတ်ကိုရယ်နေတာပါဘဲဗျာ။)
ဖိုးဖိုး လဲ အသက်ကြီးရင်
ကုသိုလ်လဲရ ဝမ်းလဲဝ ဆိုသလိုလို
အဲ့သီချင်း အနော်လဲ ကြိုက်တယ် …
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် .. အခုတောင် ဖွင့်ထားသေး
Bad Day လဲ မမြဲဘူး။
Good Day လဲ မမြဲဘူး ကွယ်ရို့။
သူပုန်ဆိုတာ ရခိုင်လို ဆပ်ပြာခဲကိုပြောတာဆိုလား ကြားဖူးတယ်………။ ဘာသူပုန်လဲဟင် ဆပ်ပြာခဲ တံဆိပ်ကိုပြောတာပါ….။ ရွှေဝါလား ကာဘော်လစ်လားလို့ မေးကြည့်တာ
တရုတ်ဆိုတာရဲ့.. အဓိပ္ပါယ်ကလည်း.. သူပုန်ပဲလို့.. ဆိုသတဲ့..
ဒ မှာ သဘုန်ဂျီးရဲ့ ….
သဒင်းဆိုတာ အထူး အဆန်း ဖြစ်လေ့မရှိတာမျိုးဖြစ်မှ သဒင်းလို့ခေါ်ဒယ်….
နောက်ဆို ထမင်းစားရေသောက်တွေ သဒင်းလုပ်မရေးနဲ့ …
ဟုတ်သားဘဲ ဦးပါရယ် အနော်မေ့တွားလို့ …..
ဝုတ်ကဲ့ နောက်ရေးတော့ဘူး ဟိဟိ